अन्तराष्ट्रिय Archives - Page2of 36 - बिगुल न्यूज
चैत ०१, २०७४ Asinam Telar
अमेरिका, ३० फागुन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बुधबार बोलाइएको छ । रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई एकाएक बेलायतले देश निकाला गरेपछि बेलायतकै आग्रहमा आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो । रुसका एक जना …
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक आह्वान!यस्तो छ कारण!!
फागुन ३०, २०७४ ST
संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बुधबार बोलाइएको छ । रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई एकाएक बेलायतले देश निकाला गरेपछि बेलायतकै आग्रहमा आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो । रुसका एक जना …
अन्तरिक्ष सेना बनाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव!
सान डियागो, संयुक्तराज्य अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले अब अन्तरिक्ष सैन्य बल (स्पेस् फोर्स्) गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अमेरिकी सशस्त्र बलको नयाँ अंगका रुपमा ‘स्पेस फोर्स’ गठन …
चर्चित गायक उदित नारायण झा अस्पताल भर्ना !
फागुन ३०, २०७४ DB - Bigul Media
मुम्बई । चर्चित गायक उदित नारायण झा अस्पताल भर्ना भएका छन्। झाको स्वास्थ्यमा एक्कासी खराबी आएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो । नेपालमा जन्मिएका गायक झाले थप्रै नेपाली, हिन्दी, भोजपुरी, बंगाली लगायत अन्य भाषाहरुका निकै चर्चित गीतहौ …
ढाका । बंगलादेश सरकारले बंगलादेशी विमान सेवा युएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्तगर्दै राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ । सरकारले बुधबार यस्तो शोकको घोषणा गरेको हो । …
बैज्ञानिक स्टीफन हकिंगको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनका परिवार र प्रवक्ताले जनाएका छन् । उनि विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक थिए , भौतिक शास्त्रमा बिशेष दखल भएका उनिले …
फागुन २९, २०७४ DB - Bigul Media
एजेन्सी । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन एक फिल्म छायाँकनकै बेला एक्कासी विरामी परेका छन्। अमिर खानको निर्माण रहेको फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दूस्तान’को शुटिङमा रहेका अभिनेता अमिताभ मंगलबार विहान अचानक शुटिङ सेटमै ढल्न पुगेका थिए । …
जोलीले भने, ‘ओली सरकारले ५ वर्षमा विकास र सम्वृद्धिको कायापलट गर्छ।’
काठमाडौँ । मंगलबार राजधानी काठमाडौँ भएको एउटा साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता विजय जोलीले अब केपी ओली सरकारले नेपालमा विकास र सम्वृद्धिको कायापलट गर्ने …
जहाज दुर्घटना बारे युएस बंगलाले मुख खोल्यो, काठमाडौँ एयरपोर्टलाई लगायो यस्तो आरोप
एजेन्सी । सोमबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बंगला विमान दुर्घटना विमानस्थल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरुम (एटिसी) गलत निर्देशनका कारण भएको बंगला एयरलाइन्सले बताएको छ। बंगला एयरलाइन्सका प्रमुख इमरान असिफले जनाए अनुसार चालक र विमानमा कुनै खराबी …
बगदाद । इराकको किर्कुक प्रान्तमा पर्ने हावीजाहमा राखिएको विद्युतीय धरापमा परी १८ जना अर्धसैन्य बलका अधिकारीको मृत्यु भएको समाचार छ । उक्त धराप इस्लामिक स्टेट (आईएस) ले थापेको जनाइएको छ …